Hrithik Roshan oo la siiyay ninka India ugu qurxan ee Mr India. Daawo Sawirada
Jilaaga Bollywood Hritihik Roshan ayaa loo caleema saaray inuu noqday ninka ugu qurxoon dalkaasi India kadib markuu ku guuleystay jagada Mr India oo ah tartan loo qabto ragga ugu shidan dalkaasi. Tartankan oo ay soo qaban qaabisay shirkada caanka ah ee dharka ragga habeeysa ee Peter Engsland ay...
Karishma Kapoor: Waxaan jeclaan lahaa inaan walaashey Kareena Kapoor filim la jilo mar uun.
Atriishada Bollywood ee Karisma Kapoor ayaa sheegtay in ay jeclaan laheyd in ay filim wada dhigaan iyada iyo walaasheed atriishada Kareena Kapoor Khan. Karisma ayaa waxey jeclaan laheyd in ay aragto iyada iyo walaasheed oo door muhiima ka cayaaro filim cusub. Waxaa la ogsoonyahay in ay Karishma oo...
Kanye West oo ku dhuftay, isbitaalka madaxa oo loola cararay caawa.
Fanaanka Mareykanka ee Kanye West ayaa maanta la sheegay inuu ku dhuftay oo uu waashay asigoo ka cabanaya xanuunka madaxa ku dhaca. Kanye ayaa maalmahanba xanuunsanaa asigoo xataa baajiyay xaflado badan oo ka tumi lahaa dhawaan. Wali ma cadda sababta xanuunkaani balse waxaa ilo ku dhaw qoyska K...
Wargeys faafiyay Sawirada xaaska Donald Trump oo qaawan iyo Fadeexad soo wajahday aqalka cad.
The Rock oo loo aqoonsaday ninka ugu soo jiidashada badan dunida.
Madonna oo da'da la dagaalantay balse laga dareemay gacmaheeda kaliya.
Fanaanada caanka ah ee Madonna oo 58 jir ah ayaa la dagaalantay da'da in ay ka muuqato iyadoo sameysay qaliino isqurxin ah iyo make up aad u sareeyo taasoo keentay in ay u ekaayo gabar yar waji ahaan iyo jir ahaan laakiin waxaa muuqatay in ay Madonna da'deeda laga dareemay gacmaheeda o...
Khadar keeyow , Fanaan Muqdisho usoo kacay oo la hollin kari waayay. Daawo
Fanaanka da'da yar ee Khadar Keeyow ayaa noqday fanananka haatan loogu dhageysiga badanyahay dalka iyo qurba joogtaba waxaana Keeyow oo ah fanaan ku nool Magaalada Muqdisho heesahiisa laga dhex maqlaa dhamaan geyiga Soomaalida isagoo meel cad uga tagay fanaaniin badan oo waayahan dalka ka heesay...
Snoop Dogg oo u qaxi doona Canada, asigoo sheegay inuu Mareykanka ugu qaxayo Trump.
Heesaaga Snoop Dogg ee u dhashay California Mareykanka ayaa sheegay inuu u qaxayo dalka Canada asiga oo iskaaga tagayo dalkiisa hooyo ee Mareykanka kadib markuu ka warhelay in la doorto inuu madaxweyne ka noqdo Donald Trump oo ku guuleystay jagadaasi kaasoo aad ay iugu baqeen dadka aan cadaanka ahey...
Hollywood oo ku kacay wargeysa People kadib markuu sawirka Donald Trump soo saaray bogga hore.
Jilayaal badan oo Hollyood ka tirsan ayaa bartooda twitter ku dhaleeceeyay wargeyska caanka ah ee People Magazine kadib markuu bogga hore ku daabacay sawirka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee Donald Trump kaasoo doorashada ku guuleystay isbuucaan.Waxaa lagu eedeeyay waregyskan inuu maja xaabi...
Leonardo Dicaprio oo dadaal ugu jira badbaadinta deegaanka iyo isbedelka cimilada, wareysi ayuu Obama la yeeshay
Jilaaga Leanardo Dicaprio oo caan ku ahaa filimkii Titanic ayaa waayahan dambe waxuu noqda jilaa aad ugu dooda dhowrista deegaanka iyo dhulka aynu ku noolnahay ee koonka asigoo mar walba waqti galiya inuu dadka ka dhaadhacsiiyo sida loo dhowri lahaa deegaanka oo ay muhiim noo tahay inaanu xafidno. L...
FIFA oo soo bandhigtay liiska Cayaartooyda u sharaxan abaalmrinta ballon d'or ee cayaartoyga sanadka ee aduunka.
FIFA oo soo bandhigtay liiska Cayaartooyda u sharaxan abaalmrinta ballon d'or.Xiriirka Kubadda cagta ee adduunka ee Fifa ayaa waxu ku dhawaaqay liiska cayaartooyda ugu wanaagsan dunida ee u tartamayo cayaaryahanka u wanaagsan dunida ee sanadkan 2016. Liiskaan oo ay guddiga FIFA kusoo gaabiy...
Govinda iyo Salman Khan oo soo wada qeybtii labaad ee filimka Partner.
Jilayaasha Salman Khan iyo Govinda ayaa dib markale iskula keeni doona qeybtii labaad ee filimkii qosolka ahaa ee Partner qeybtiisii labaad. Filimkan Partner oo ay qeybtiisii koowaad isla jileen labadaan jilaa sanadkii 2007 ayaa haatan waxa la filayaa in qeybtiisii labaadna ay soo baxdo. W...
Fanaaniinta lamaanaha ah Beyonce iyo Jay Z ayaa dhigay xaflad ay ku garab istaagayeen musharaxadda madaxweynaha Mareykanka ee ka socota xisbiga Dimoqraadiga ee Hillary Clinton ugu dhigay magaalada Cleveland ee gobolka Ohio , xafladaas oo ay albaabada ugu fureen dhalinyada iyo taageerasha muusi...
Meeqa Xayawaan ayaa kaaga muuqda sawirka, Tijaabi Indhahaaga ?
Tijaabi Indhahaaga, Meeqa Xayawaan ayaa kaaga muuqda sawirkan? Sawirka waxaa ka dhex muuqda dhowr xayawaan. Tani waa su'aal adag oo dadka aysan ka wada jawaabi karin in yar mooyee, Soo qor Comment hadaad haysid ama sheegi kartid jawaabta saxda ah. Aqristayaasha Jilaa.com ayaa taasi k...
Axmed Zaki iyo Halima Gobaad oo hees aan roomaantig ah soo saaray- Daawo Muuqaalka Heesta
Fanaanka Axmed Zaki ayaa hees roomaantig ah la sameeyay fanaanada cusub ee Xalimo Gobaad , heestaan oo ah mid si cajiib ah loo duubay ayaa waxaa loogu magac daray naaska Caashaqa.Muuqaalka Heesta ayaa waxaa sameeyay Haataf Studio ee magaalada Oslo ee dalka Norway , stuudiyahaas oo ku caan baxay same...